Desambra 1, 1999 - Ellicott Dredges
Loharano: tamin'ny volana martsa A. Torre - Vaovao momba ny varotra injeniera sivily ny fantsona lehibe feno fitaovana dredged dia nampiasaina tamin'ny tetik'asa amoron-tsiraka sy ambanivohitra isan-karazany. Ny fantsom-bokatra, vita amin'ny polyester mahery na geotextile polypropylene, dia nofenoina dredge, toy ny marika Ellicott® Series 370 na marika Ellicott® marika "Dragon®" cutter marika Ellicott® lehibe kokoa. Ireo fantsona geotextile dia matetika fenoina fitaovana eo an-toerana; na izany aza, azo ampidirina sy ampiasaina ny fitaovana hafa. Fampiharana mahazatra dia ahitana: famerenana amin'ny laoniny ny fasika, fananganana dike, fananganana lalan-driaka, haran-dranomasina artifisialy ary fitoerana fako tsotra. Ny fantsona dia fenoina amin'ny toerany ary ...